S-Corporation Type Business
Ny orinasam-panjakana S dia endriky ny orinasa orinasa izay nomena anarana satria izy io dia rafitra amin'ny fomba izay mihaona, ary latsaka ambany noho ny soso-kevitra, amin'ny fehezan-dalàna IRS Fitsinjaram-pahefana IR. Amin'ny lafiny maro, dia toy ny orinasa nentim-paharazana, saingy amin'ny toetra sasantsasany amin'ny fiaraha-miasa izay mety hahasoa tombontsoa amin'ny orinasam-pandraharahana. Ny iray amin'ireo tombontsoa voalohany amin'ny fikarakarana ho toy ny chapitre S Corporation dia ny fandoavana ny hetra. Misy ny fandoavan-ketra raha toa ny tompon'ny hetra amin'ny hetra isan-karazany, toy ny fiaraha-miasa, fa tsy amin'ny orinasa voalohany, ary amin'ny ambaratonga hafa. Izany dia manome ny tsara indrindra amin'ny tontolon'ny tontolon'ny mpandray anjara amin'ny ankapobeny-ny tombontsoa azo avy amin'ny fananana hetra amin'ny fiaraha-miombon'antoka tsotra, ary ny fiantohana tsy miankina sy ny fiarovana izay azon'ny orinasa iray atao.
Ny orinasa (or "C") orinasa (or "C") dia hetra amin'ny vola miditra ho toy ny orinasa iray, avy eo, ny hetraketraky ny mombamomba ny tompon-tany tsirairay dia indray haba amin'ny tahan'ny olona (manodidina ny 15% ho an'ny hetra federaly). Ity dia fantatra amin'ny fisiana fisavoritahana roa hetra ary anisan'ny antony lehibe mahatonga ny S Corporation.
Ny S Corporation, etsy ankilan'izany, dia tsy voatery haba amin'ny orinasa. Ny hetra kosa dia mifototra amin'ny famindrana ho an'ireo tompon-tany amin'ny ampahany isan-tsokajiny. Zavatra iray tokony hotadidinao fa ny fisamborana dia mitranga na tsia ny fizarana amin'ny tompon-tany. Midika izany fa ny fidiram-bola dia hetra indray mandeha monja, ho an'ny fizarana ny tompom-bola.
Ity fomba fitsaboana mandalo amin'ny alalan'ny fandefasana ity dia mety ho ny tratra sy ny fisalasalana. Ohatra, andao haka orinasa fanta-daza antsoina hoe Wallaby, Inc. Hilaza isika fa misy mpiara-miombon'antoka telo, John, Jack ary Jacob, miaraka amin'i John manana 50%, Jack manana 25%, ary Jacob ny sisa 25%. Wallaby, Inc. dia nahazo $ 10 tapitrisa tamin'ny herintaona toy ny vola miditra. Amin'ny fotoana hetra, i John dia mila mitaky $ 5 tapitrisa, Jack $ 2.5 tapitrisa, ary Jacob ny sisa $ 2.5 tapitrisa. Raha toa i John, toy ny tompon'ny ankamaroany, dia manapa-kevitra fa tsy hizara ny tombom-barotra amin'ny vola miditra, dia mbola hizaka ny hetra amin'ny vola i John, Jack ary Jacob, toy ny hoe zaraina amin'ny fomba toy izany, na dia tsy nisy cash distribution. Ity toe-javatra ity dia azo tanterahina amin'ny alàlan'ny antsoina hoe "filalaovana fihenam-bidy" ataon'ny mpiara-dia (na mpiara-miasa) amin'ny fikasana hamongotra mpiara-miasa vitsy an'isa na mpiara-miasa.
Ao amin'ny orinasa nentim-paharazana, na dia misy ny hetran'ny orinasa voalohany aza, dia tsy misy ny hetra aloa amin'ny tompon'ny shareholder raha tsy misy ny fizarana marina.
Ny fametrahana hafa amin'ny S Corporation dia ny hoe ny isan'ireo mpizara hetra dia voafetra amin'ny 100, ary raha misy mpiara-miombon'antoka iray monja, dia misy ny loza mananontanona ankehitriny fa ny IRS dia tsy miraharaha ny satan'ny toko S ary mitantana ny orinasa ho toy ny orinasa maromaro ho an'ny tanjona hetra. Ity dia azo inoana kokoa ny tranga raha misy ny fiviliana amin'ny fombafomba fikambanana.
Ny famolavolana fikambanana toy ny orinasa S dia midika ihany koa fa, toy ny tambajotra nentim-paharazana, ny fombafomba fikambanana dia tsy maintsy tazonina. Ny fombafomba ara-barotra dia ny hetsika tsy maintsy ataon'ny talen'ny orinasam-panjakana, mpiandraikitra, na tomponandraikitry ny orinasa mba hihazonana ny fiarovana omen'ny famolavolana ny orinasa. Ireo dia fepetra tena ilaina izay arovana mba hiarovana ny fananana manokana ataon'ny tale, ny tompon'andraikitra, ary ny tompon-tany.
Ireo fombafomba dia azo fintina toy izao:
Ny Tahiry ara-bola dia tsy maintsy misaraka miavaka ary ankoatra ny vola ataon'ny Personal.
Tsy maintsy misy ny fivoriana fanao isan-taona ataon'ny Biraon'ny Tale.
Tsy maintsy misy ny Minisitra Minisitera sy ny manampahefana voatendry handray sy hikarakarana ireo minitra.
Ny fanoloran-tena rehetra, fifanarahana, ary ny fananganana stratejika rehetra dia tokony ho amin'ny endrika voasoratra.
Ny fifanakalozan-kevitra bebe kokoa sy ny famaritana ny fombafomba fikambanana dia azo jerena ao amin'ny fizarana misy antsika Lisitry ny fikarakarana ara-barotra. Ankoatra izay, dia manamarika fa ny fifehezana ny fombafomba momba ny orinasa dia tsy maintsy atao amin'ny asa mahomby ataon'ny orinasa. Ireo fombafomba ireo dia miompana amin'ny fitazonana ny fahazoan-dàlana hetra sy ny tombontsoa azo avy amin'ny hetra nomen'ny fanjakana.
Famindrana ny fitsaboana Subchapter S
Ny dingana ilaina ilaina mba hahazoana ny satan'ny S dia tsy sarotra be, saingy mila fiheverana hentitra azy ireo mba hahazoana antoka fa manakana ny fanaraha-maso ny tombontsoa sy ny tombontsoa azo avy amin'ny sata.
Mba hanombohana, ny tomponandraikitry ny orinasa iray efa misy, na tompon'ny orinasa vaovao, dia tsy maintsy manatanteraka ny IRS Form 2553, miaraka amin'ny antontan-taratasy ao an-toerana raha mahafantatra ny orinasam-panjakana ny toeram-ponenana ho an'ny orinasa. na izany aza, ary ny hafa dia mamela ny anarana S ary manaraka ny paikady mitovy amin'izany). Ny famonoana sy ny fangatahana amin'ity fifidianana ity dia tsy maintsy hitranga alohan'ny andro 16dia amin'ny volana fahatelo aorian'ny fandaniana ny hetràn'ny orinasa fambolena, mba hahafahan'ny orinasa horaisina ho an'ny sata S nandritra ny taona hetra amin'ny hetra. Ny orinasa dia tsy maintsy mahafeno ny fepetra S Corporation mandritra ny volana 2.5 voalaza etsy ambony, ary ny mpandray anjara rehetra dia tsy maintsy manaiky ny sata, na inona na inona izy ireo na tsia amin'ny fotoana fanovana ny sata.
Famindrana ny sata mifehy ny fifidianana
Ny S Corporation Corporation dia azo alaina an-tsitrapo amin'ny alalan'ny fametrahana ny fehezan-dalàna momba ny famaranana. Ity karazana famerenana ny sata ity dia azo atao amin'ny fankatoavana sy ny faneken'ny tompon'andraikitra maro an'isa. Ny dingana feno, sy ny fepetra ilaina rehetra ilaina ilaina dia azo jerena ao amin'ny fizarana IRS Regulations 1.1362-6 (a) (3) sy amin'ny torolàlana momba ny IRS Form 1120S, US Tax Return ho an'ny orinasa S.
Ny fanesorana tsy ara-dalàna na ny famaranana ny sata dia mety hitranga amin'ny fotoana rehetra ny masoivohom-panjakana, toy ny IRS na ny Biraon'ny taxi-panjakana momba ny Franchise, dia manambara ny fanitsakitsahana ny fepetra takiana, na ny tsy fahampian'ny fiatraikany, ny tsy fahombiazan'ny fikarakarana ny fombafomba fifehezana ny sata maha-ara-dalàna ny orinasam-panjakana.
Iza no tokony hikarakara ny orinasa S?
Ny fiaraha-miombon'antoka, vondrona mpampiasa vola, na ireo mpiara-miombon'antoka ao amin'ny orinasa mitady ny tombotsoa roa ho an'ny fialofana voafetra sy ny fandoavan-ketra dia tokony handinika tsara ny sata S Corporation, raha toa ka mahafeno ny fepetra hahazoana alàlana. Misy tombontsoa maro azo alaina avy amin'io fikambanana io, na dia fanapahan-kevitra tokony horaisina amin'ny fanampian'ny manam-pahaizana informatika amin'ny orinasan-tseraseran'ny Sampanasa.
Ny orinasa S (izay antsoina hoe toy izany noho ny fandaminana ny fihaonana amin'ny fepetra IRS hividianana azy eo ambanin'ny Subchapter S amin'ny Code of Internal Income) dia orinasa iray izay nanaovana ny fifidianana ny sivana S ho an'ny fikarakarana azy ho toy ny làlana - Fisolokoloana ho an'ny tanjona hetra, toy ny fiaraha-miasa izay ny fidiram-bola na ny fatiantoka dia "mandalo" any amin'ny fiverenan'ny hetra isan-tsokajiny (amin'ny ampahany mivantana amin'ny fampiasam-bola na ny tompony amin'ny orinasa), ary mbola manome fiarovana mitovy amin'izany ihany avy amin'ny fatiantoka ho toy ny orinasa nentim-paharazana. Ny tompom-barotra dia handoa hetra amin'ny vola miditra amin'ny vola miditra amin'ny tambazotra S, na dia tsy zaraina na tsia ny vola miditra, fa izy ireo dia hisoroka ny "hetra avo roa heny" izay tsy inona fa ny orinasa tradisionna (na "C").
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny orinasa nentim-paharazana sy ny S Corporation
Noho ny "fandalovany" rafitra hetra, ny orinasa S dia tsy iharan'ny hetra eo amin'ny sehatry ny orinasa, ary noho izany dia manakana ny fandikana ny "hetra roa" (amin'ny orinasa orinasa na tradisionaly, ny fidiram-barotra ara-barotra voalohany dia haba amin'ny orinasa , dia haverina indray ho fidiram-bola manokana ny fividianana ny fidiram-bolan'ny mpandray anjara tsirairay), izay mahakasika ny orinasa C.
Tsy sahala amin'ny dividends C ny fividianana vola amin'ny tahan'ny federaly 15.00%, ny orinasam-pitrandraka S (na ny marimaritra kokoa mitondra ny lohateny hoe "Distributions") dia voatery hetra amin'ny sanda ara-tsosialin'ny mpandray anjara. Na izany aza, ny dividendan'ny fikambanana dia miankina amin'ny fihenan-danja roa voalaza etsy ambony. Ny fidiram-bola voalohany dia haba amin'ny orinasa voalohany alohan'ny hizarana azy io ho toy ny dividend ary avy eo dia haba toy ny fidiram-bola rehefa omena ny mpandray anjara tsirairay.
Ohatra, ny Cogs Inc, dia niorina toy ny orinasa S, mitentina $ 20 tapitrisa amin'ny fidiram-bola amin'ny banky ary manana an'i 51% an'i Jack sy 49% avy amin'i Tom. Ao amin'ny fiverenan'ny hetra ho an'i Jack, dia hitatitra ny $ 10.2 tapitrisa amin'ny vola miditra izy ary Tom dia hitatitra $ 9.8 tapitrisa. Raha toa ka manapa-kevitra ny tsy hizara ny tombom-barotra amin'ny vola i Jack (tahaka ny tompon'ny maro an'isa), i Jack sy Tom dia mbola hizaka ny hetra amin'ny vola toy ny hoe zaraina amin'ny fomba toy izany, na dia tsy nahazo naotina be aza. Ity dia ohatra iray amin'ny lalao "squeeze play" iray izay azo ampiasaina amin'ny ezaka hanerena mpiara-miasa vitsy an'isa.
Tanjona tetsy amin'ny S Corporation
Manana tombontsoa lehibe ho an'ny orinasa iray ny sata S corporation. Voalohany indrindra, mazava ho azy, ny tanjona dia ny hahatratra ny andraikitra tsy voafetra, na ny fanamafisana ny fiantraikan'ny lalàna manokana, na ny endrika hafa amin'ny trosa mahazo ataon'ny tompon-tany, amin'ny mpandray anjara, ary ny fiarovana azy ireo amin'ny fiantraikany amin'ny orinasa amin'ny ankapobeny, na ny sisa amin'ireo mpandray anjara amin'ny maha-olona azy. Io tombontsoa azo avy amin'ny fiarovana io dia marina ho an'ny orinasa nentim-paharazana sy ny orinasa S. Ny famaritana bebe kokoa ny fisafidianana ny orinasa S dia ny tombontsoa azo avy amin'ny hetra. Na dia voafetra aza ny habetsaky ny mpandraharaha manana orinasa afaka manana ny fepetra takian'ny IRS ho an'ny sata S, ny ankamaroan'ny orinasa izay mifanaraka amin'ny sandan'ny habeny (amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra, fa tsy 75 ho an'ny tompon-trano 100) bola ho toy ny orinasa S satria izy io dia ahafahan'ny mpandray anjara manokana hahazo ny fizarana vola miditra amin'ny fandraharahana. Ny orinasa dia afaka mandalo fidiram-bola mivantana amin'ireo tomponandraikitry ny tompom-pahefana ary hisoroka ny hetra avo roa heny izay mifamatotra amin'ny dividends ny orinasam-panjakana, raha mbola mankafy ny tombontsoa avy amin'ny rafitra orinasa.
Mifidy ny sata mifehy ny fikambanana
Ny fiasan'ny S orinasa S dia manana fiantraikany hetra amin'ny hetra. Ny sata S dia ahafahan'ny mpampiasa hampihatra ny tombom-barotra sy ny fahaverezan'ny orinasa amin'ny fiverenan'ny hetra isan-kerinandro. Mba hahafahana mifidy ny sata S, dia tsy maintsy ampidirina voalohany amin'ny maha-orinasam-panjakana azy ny olona iray ary avy eo mametraka ny IRS form 2553. Raha vao niditra ianao, ny orinasanao dia afaka mandefa ny sata S na oviana na oviana mandritra ny taom-pivarotana amin'ny 75 andro amin'ny daty fampidirana anao. Raha tsy izany dia tsy maintsy atao amin'ny March 15 ity hetsika ity raha toa ny orinasa mpandoa hetra mandritra ny taona, mba ahafahana mifidy ny taona amin'ny hetra. Ny orinasa iray dia mety hanapa-kevitra ny hifidy ny satan'ny S, saingy ity fanapahan-kevitra ity dia tsy hanan-kery raha tsy amin'ny taona manaraka.
Mitandrema amin'ny fidiram-bola
Ny fidiram-bolan'ny fidiram-bola dia ny fidiram-bola avy amin'ny fampiasam-bola Ny vola miditra, ny fatiantoka, ny fampiasam-bola, ny fananan-trano, sns. Ny fidiram-bola azo avy amin'ny asa natao, ny vokatra voatsangana, sns. Zava-dehibe ny hahazoana antoka fa ny fidiran'ny fidiram-bolanao S dia tsy mihoatra ny 25% amin'ny vola miditra amin'ny orinasa mandritra ny telo taona eo ho eo; raha tsy izany ny orinasanao dia mety hampidi-doza ny fananana ny satany soloin'ny IRS. Safidy tsara kokoa raha ny orinasa no andrasana handoavana fidiram-bola be dia mety ho LLC.
Fahazoan-dàlana amin'ny S Corporation Corporation
Mba hahazoana ny mari-pahaizana S corporation dia misy fepetra vitsivitsy ilaina tsy maintsy atao. 1. Ny orinasa dia tsy maintsy entina ho toy ny orinasam-pandaminana ankapobeny. 2. Aoka ho azo antoka fa ny orinasanao no namoaka sanda iray monja. 3. Ny mpiara-miombon'antoka rehetra dia mponina Amerikana na mponina maharitra. 4. Tsy misy afa-tsy ny mpihaza 75. 5. Ny tahan'ny fidiram-bolan'ny orinasa dia tsy mamaritra ny fetran'ny 25% amin'ny fetran'ny fidiram-bola. 6. Raha manana taom-pivoriana ara-potoana ny orinasa hafa amin'ny daty 31 volana Desambra, tsy maintsy mandefa alalana avy amin'ny IRS ianao. Raha efa nihaona tamin'ireo rehetra voalaza etsy ambony ireo ny orinasa dia azonao atao ny mametraka ny endrika 2553 amin'ny IRS mba hifidy ny sata S.
Ny orinasam-panafatra azo antoka dia mety ho tompona (manana "membres") orinasa, orinasa hafa, fiaraha-miasa, fitokisana ary olon-tsy olon-tsotra, vahiny tsy mitoetra. Ny orinasa S, etsy ankilan'izany, dia mety ho an'ny olom-pirenena amerikanina na vahiny irery ihany. Ny orinasa iray dia afaka manolotra lenta / kilasy samihafa ao amin'ny orinasa iray raha toa ny orinasam-piraharahana S dia afaka manolotra kilasy iray ihany. Ny orinasa iray dia mety manana mpikambana maromaro fa ny orinasa S dia voafetra amin'ny 75 ambony indrindra amin'ireo mpandray anjara 100 (arakaraka ny fitsipiky ny fanjakana izay misy azy). Raha misy mpiara-miasa ao amin'ny orinasa S iray amin'ny adihevitra momba ny tena manokana (fa tsy raharaham-barotra), dia ny ampahany amin'ny tahiry dia mety ho azo raisina. Raha misy mpikambana ao amin'ny orinasa iray ao amin'ny orinasa iray dia mianjady amin'ny raharaha manokana (fa tsy orinasa), dia misy ny fepetra mba hiarovana ny tsatòka tsy handray ny olona.
Fepetra ara-dalàna hiheverana amin'ny S Corporation
Azo antoka fa misy fepetra sy fepetra sasany tokony harahinao alohan'ny hikarakaran'ny orinasa iray ho orinasa S. Voalohany, ny tompon'ny orinasa misy orinasa iray na orinasa orinasa vaovao dia tsy maintsy manao fifidianana ho orinasa S amin'ny IRS Form 2553 (ary ny endrika mifandraika amin'ny fanjakana izay nampidirana ny orinasa) alohan'ny andro 16 ny volana fahatelo aorian'ny fakana ny taom-pivorian'ny C raha toa ka mahomby amin'ny fifidianana ny taona. Ny orinasa C dia tsy maintsy mendrika ho toy ny orinasam-pifidianana mahazatra mandritra ireo volana 2 1 / 2 ary ny mpandray anjara rehetra mandritra ireo volana 2 1 / 2 ireo dia tsy maintsy manaiky, na dia tsy manana tahiry aza izy ireo amin'ny fotoana fifidianana. Raha alefa ny andro fialantsasatry ny volana fahatelo amin'ny taom-pivoarana ny fifidianana, dia hisy fiantraikany amin'ny taona manaraka ny fifidianana ary tsy maintsy ekena ny mpihira rehetra amin'ny fotoana fifidianana.
Famaranana ny sata S Corporation
Ny fandefasana an-tsitrapo ny fifidianana S dia natao tamin'ny fangatahana fanambarana tamin'ny Ivontoerana Fanompoana izay nandefasana ny fifidianana tany am-boalohany. Ny fanavotana dia tsy azo atao afa-tsy amin'ny faneken'ny tompon-trano, izay, tamin'ny fotoana nanaovana ny famoahana, dia mitazona mihoatra ny antsasaky ny isa nomen'ny ampahany amn'ny tahiry (ary tafiditra ao anatin'izany ny voka-pifidianana) avy amin'ny orinasa. Misy fampahafantarana manokana izay tsy maintsy ampidirina ao amin'ny fanambarana ary ity fampahalalana ity dia asongadina ao amin'ny fizarana Regulations 1.1362-6 (a) (3) sy amin'ny toromarika momba ny IRS Form 1120S, US Tax Returns ho an'ny orinasa S.
Ny fanesorana dia mety manondro daty mahomby raha mbola eo an-daty na aorian'ny daty namerenana ny famoahana. Raha tsy misy daty voatondro ary ny famoahana dia alefa alohan'ny andro 15dio amin'ny volana fahatelo amin'ny taom-pivarotana, ny famoahana dia ho mahomby amin'ny taona amin'ny hetra. Raha voavotra ny andro fanesorana amin'ny andro fahatelo amin'ny volana fahatelo amin'ny taom-pivarotana, ny fanesorana dia ho tonga soa ho an'ny taom-pivoarana manaraka.
Tokony hikarakara ny orinasako ve aho?
Raha mikasa ny orinasanao ianao dia manana mpihazona maherin'ny sasany (saingy kely noho ny fetra amin'ny maha-olona anao manokana) ary azonao atao ny mankasitraka ny tombontsoa azo avy amin'ny fandoavan-ketra, ary koa ny fahatakarana ny mety ho trangan-javatra tafiditra amin'ny "tsy fandoavam-bola" ny fizarana, "ary mihaona amin'ny fepetra araka ny lalàna voalaza etsy ambony ianao, avy eo ny orinasa S dia afaka mandeha lavitra mba hahatonga ny raharaham-barotra ho mendrika sy manintona amin'ny mpampiasa vola.